“Waxaan jeclaan lahaa inaan xirto Maaliyadda lambarka 7-aad ee Barcelona” – Griezmann – Gool FM
(Barcelona) 30 Mar 2019. Ciyaaryahanka Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu jeclaan lahaa inuu xirto maaliyadda lambarka 7-aad ee kooxda Barcelona, isagoo sidoo kale daaha ka rogay inuu murugo dareemayo kaddib markii dib loo dhigay tartanka Euro.
Waxa uu daboolka ka qaaday Griezmann inuu doonayey inuu xirto maaliyadda lambarka 7-aad ee Barcelona kulan ay Online-ka kula ciyaarayeen kooxda eSports ee Grizzi Esport.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan soo celiyo lambarka 7-aad ee maaliyada Barcelona, karantiilku si fiican ayuu u socdaa, laakiin waxba lagama qaban karo, aad ayaan u xiisay kubada cagta.” ayuu yiri Griezmann.
“Wax fikrad ah kama haysto goorta tartanku dib u bilaaban doono, mana garanayo goorta aan tababarka dib u bilaabi doono.
“Waan ka niyad-jabsanahay in dib loo dhigo koobka Euro, laakiin waa ay fiicneyd sababtoo ah waxaan haysannay ciyaartoy badan oo dhaawac ah xilli ciyaareedkan.”
“Waxaan haystaa koobka adduunka oo yaala bartamaha miiskayga qolka cuntada.” ayuu hadalkiisa ku sii daray Weeraryahanka xulka qaranka Faransiiska.